Daafaca reer France ee Samuel Umtiti oo ka hadlay mustaqbalkiisa Barcelona – Gool FM
(Spain) 25 Juunyo 2019. Daafaca kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti ayaa shaaca ka qaaday inuu sii joogayo Blaugrana xili ciyaareedka soo socda, xili ay jiraan warar sheegaya inuu ka tagayo suuqan xagaaga.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Samuel Umtiti kaasoo uu kaga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Waxaan ku jiraa xaalad aad u fiican, xili ciyaareedkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa mid aad iigu adag, sababa la xiriira dhaawaca aan la kulmay, waan ogaa inay taasi dhici karto”.
“Tan iyo koobkii adduunka 2018 waxaan garwaaqsaday inaan la kulmi doono dhibaatooyin waa weyn”.
“Dhamaadka xili ciyaareedka waxaan awooday inaan mar kale ciyaaro, haatanna waxaan diyaar u noqon doonaa xilli ciyaareedka soo socda, waxaan diyaar u noqon doonaa 200%”.
“Waxaan si buuxda ula jaan qaaday nolosha Barcelona, aniga ahaan waa meesha ku haboon inaan ku ciyaaro isla markaana aan ku noolaado , saaxiibo, maskaxda dadka, marka kuma fikirin wax ka fiican, waan ku faraxsanahay maalin kasta”.
Yeelkadeeda, Heshiiska Samuel Umtiti ee kooxda Barcelona ayaa gaaraya ilaa iyo 2023, xili laga war qabo in xili ciyaareedkii lasoo dhaafay uu u ahaa mid aad u xun, sababa la xiriira dhaawaca ka soo gaaray dhanka jilibka isla markaana in mudo ah uu garoomada ka maqnaa, taasoo ka dhigtay in tababare Ernesto Valverde uu ku tiirsanaado adeega Clément Lenglet.